टोरसो सेक्स डल्स लाइटवेट मिनी हिप्स र बिक्रीको लागि
TPE र सिलिकॉन सेक्स गुड़िया टोरसो नि: शुल्क शिपिंग सफा गर्न को लागी
यदि तपाईंसँग अपर्याप्त भण्डारण ठाउँ छ वा अक्सर पुतलीहरू सार्नुभयो भने, हाम्रो खुट्टा र यौन पुतल धड खेलौना अत्यन्त कम्प्याक्ट हुन्छन्, र यौन पुतलहरू खरीद गर्दा तपाईंलाई उत्तम समाधान प्रदान गर्दछ। तिनीहरू विशेष स्वादको साथ पुरुष र महिलाका लागि पनि धेरै उपयुक्त छन्, जो केवल प्रेम पुतलीको शरीरको खास भागमा मात्र रुचि राख्छन्। एक उत्तम यथार्थवादी यौन पुतल धड़ गुडाहरू मध्ये एउटा छनौट गर्नुहोस्, तिनीहरू प्रायः सबै पक्षमा पुरुष वा महिला जस्ता देखिन्छन्।
*नोट: टोर्सो सेक्स डलहरूले २०२२ नयाँ वर्षको निःशुल्क डेलिभरी गतिविधिमा भाग लिने छैनन्
He Mengsha 48CM TPR SQ-MA20026 उत्पादन आकार 48*25*17 UR Dolls Torso doll
Dale 28CM TPR SQ-MA20012 Torso Doll UR Dolls उत्पादन साइज २८*२३*१२
Salome 83CM SD291301 TPR UR Dolls SQ-MA20029 टर्सो डल सामान्य छाला
Tianna 31CM TPR SQ-MA20032 Torso doll UR Dolls उत्पादन साइज ३१*१८*१३
Lifelike सेक्स डोल टोरसो प्रभाव न्यूनतम
टर्सो सेक्स डललाई प्रेम पुतली पनि भनिन्छ। तिनीहरू सिंथेटिक मानव-जस्तै यौन खेलौनाहरू हुन् जसले यौन आनन्द र सहवास प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो। यहाँका धड पुतलीहरू मध्यम मूल्यका छन्, भण्डारण गर्न सजिलो छ, र हिँड्दा र खेल्दा हल्का वजनका छन्। महिला र पुरुष धड़ उपलब्ध छ। आखिर, यदि तपाइँ केवल उनको खुट्टामा रुचि राख्नुहुन्छ भने, किन एक किन्नुहोस् पूर्ण आकारको धड़ सेक्स पुतली?
शरीरको वक्र देखि यथार्थवादी देखिने निप्पल र जननांग सम्म, सही फोहोर सही ठाउँमा राखेर, तिनीहरू अविश्वसनीय रूपमा अचम्मको देखिन्छन्। तिनीहरूको आकार र बनावट एक वास्तविक महिला जस्तै छ। थप रूपमा, तिनीहरूको आकारले यी बनाउँछ पुरुषहरूको लागि यौन पुतल धड सफा गर्न सजिलो, चाहे सिङ्क, नुहाउने, वा अन्य ठाउँमा।
तिनीहरूसँग समान यौन र शारीरिक विशेषताहरू छन् पूर्ण आकारको सेक्स पुतली सानो र सस्तो प्याकेजिङमा। यी पुतलीहरू आकारमा पूर्ण छन् तर मानव शरीर रचनाको केही भागहरू छैनन्। तिनीहरूसँग हाम्रो पूर्ण आकारको पुतली सेभर्सका सबै कार्यहरू छन्, र स्पष्ट आन्तरिक हड्डीहरू, सुपर नरम र लोचदार TPE मासु, र अन्य विकल्पहरू छन्!
पर्याप्त बजेटको साथ आफ्नो अनुभव सुधार गर्न चाहने पुरुषहरूको लागि, हाम्रो धड़ आदर्श प्रवेश-स्तर पुतली अनुभव हो। यदि तपाईं पुतलीहरूसँग खेल्न चाहनुहुन्छ र सबै अतिरिक्त अंगहरूसँग परेशान गर्न चाहनुहुन्न भने, हाम्रो अद्भुत Torsodolls सही समाधान हो! यसको आकारले यी बनाउँछ। जापानी सेक्स डल्स सफा गर्न सजिलो। चाहे तपाईं यो सिङ्कमा, नुहाउने ठाउँमा वा अन्य ठाउँमा गर्दै हुनुहुन्छ। यसले तपाईंलाई वयस्क खेलौनाहरू भण्डारण र बोक्न नदिई पूर्ण व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ। थप रूपमा, यी मोडेल र बनावट आधा-लम्बाइ टोर्सो निजी भण्डारणको लागि उपयुक्त छ र बोक्न सजिलो छ।
तपाईको टोर्सो सेक्स डलको हेरचाह कसरी गर्ने?
सेक्स डल टर्सोलाई लगभग दुई प्रकारमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ जुन TPE र सिलिकनबाट बनेको हुन्छ। TPE (थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर) पुतलीहरूको लागि, तिनीहरू अधिक उच्च-रखरखाव हुन् तर तिनीहरूको मूल्य पनि कम छ र स्पर्श गर्न नरम छन्। जबकि सिलिकॉन सेक्स पुतली धेरै टिकाउ छन् तर महँगो पनि छन्। त्यसोभए यदि तपाइँ नयाँ आगमन हुनुहुन्छ वा TPE सेक्स डल किन्न विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँसँग उनीहरूको हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने बारे ज्ञानको राम्रो कमाण्ड हुनुपर्दछ। राम्रोसँग हेरचाह गरिएको TPE पुतली धेरै वर्षसम्म टिक्न सक्छ।
यदि तपाईंले यस प्रकारको सामग्री बुझ्नुभएको छैन भने, TPE यौन पुतलीहरूको मर्मत अलिकति कष्टप्रद हुन सक्छ। TPE एक सामग्री हो जुन सिलिकन भन्दा बढी छिद्रपूर्ण छ र अधिक आर्द्रता कायम राख्न सक्छ र आर्द्रता को लागी अधिक संवेदनशील छ। यसबाहेक, यो छिद्रपूर्ण भएकोले, तपाईले यसलाई बाँझ बनाउन सक्नुहुन्न किनभने यसले यसलाई क्षति पुर्‍याउँछ। तर यदि तपाईं मर्मतमा थप प्रयासहरू गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, TPE छ गुडिया दाग र ढाँचा जोगिन सक्छ, र लामो समय को लागी ताजा रहन सक्छ।
किन किन्ने उत्तम सेक्स डल टर्सो ?
यदि तपाईंसँग घरमा धेरै ठाउँ छैन तर एको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने वास्तविक पुतली, वा तपाइँ वयस्क आकारको हल्का संस्करण चाहनुहुन्छ मनपर्दो पुतली, पुरुष टर्सो सेक्स डल तपाईको लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ। महिला धड़ यौन गुड़िया किफायती, भण्डार गर्न सजिलो, र सार्न र खेल्नको लागि हल्का छन्। त्यसैले एक यथार्थवादी सिलिकॉन सेक्स पुतली टर्सो किन्नुहोस् महत्त्वपूर्ण छ।
हामीबाट किन किन्ने आधा टर्सो सेक्स डल ?
हामी किफायती र उच्च गुणस्तरको यथार्थवादी जीवन आकारको सेक्स डल टर्सोको उत्कृष्ट चयन प्रस्ताव गर्दछौं। हामीसँग किन ठूलो सम्झौता र मूल्यहरू छन्? हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईलाई उत्कृष्ट पुतली फेला पार्नु हो ताकि तपाईले आफ्नो सपना साकार बनाउन सक्नुहुन्छ, र त्यसो गर्नको लागि हामीले तपाईलाई उत्कृष्ट मोडेल, मूल्य र अनुकूलन विकल्पहरू ल्याउन चीनका शीर्ष निर्माताहरूसँग साझेदारी गरेका छौं। चाहे तपाइँ TPE, सिलिकन मा हेर्दै हुनुहुन्छ, सस्तो धड़ सेक्स पुतली वा यथार्थवादी आकार सेक्स पुतली, हामी तपाइँको सबै भन्दा राम्रो छनोट हो।
सेक्स डल टर्सो महिला र पुरुषहरूको लागि बनाइएको हो, र त्यहाँ धेरै पुरुष र महिला शरीरका अंगहरू छन्। माग बढ्दै जाँदा, उत्पादकहरूले केही नयाँ विचारहरू, प्रयोगको साथ आउन थाल्छन् tpe सेक्स पुतली धड़ यथार्थवादी ढाँचाहरू, र अधिक र अधिक नयाँ सेक्स पुतली टोर्सो उत्पादन। तसर्थ, तपाईं पुरुष होस् वा महिला, तपाईंले आफ्नो मनपर्ने कुरा पाउनुहुनेछ। यदि तपाइँ ठूला स्तनहरू मनपर्छ भने, त्यसपछि एक किन्नुहोस् BBW धड, वा गधा, लिंग, इत्यादि। सायद तपाईं महिलाको खुट्टा चुदाउन चाहनुहुन्छ, ताकि तपाईं एक किन्न सक्नुहुन्छ। मिनी धड़ यौन गुड़िया खुट्टा सेक्सको मजा लिन खुट्टा।